CIYAARAHA CAALAMKA | Ciyaaro Online | Page 129
Home - CIYAARAHA CAALAMKA (page 129)
Halyeeyga musaaricada Ric Flair oo John Cena ugu hambalyeeyay rikoorkii uu ka bar-bareeyay.
Halyeeygii hore ee ciyaaraha musaaricada Ric Flair ayaa kusugnaa bartii ay kasocotay bandhigga Royal Rumble waxaana qorshaha uu ahaa in Ric Flair uu riingaha musaaricada kala soomuuqdo John Cena kadib markii uu suunka WWE kaga guulaystay AJ Stylez, maadaama uu bar-bareeyay guulaha dhanka suunka WWE. Ugu dambayn Arinkii horey loo qorsheeyey ayaa dhicisoobay, balse Ric Flair ayaa guushii uu Cena ...
Randy Orton oo 29 dagaalyahan kaga guulaystay tartanka Royal Rumble.
Dagaalyahanka ciyaaraha musaaricada ee Randy Orton ayaa kuguulaystay ciyaartii Royal Rumble oo udhaxaysay 30 dagaalyahan. Orton ayaa awood uyeeshay inuu ciyaartaasi kaga guulaysto 29 dagaalyahan oo ay kujiraan dagaalyahanada halista ah ee Goldberg, brocklesner iyo kuwo kaloo badan. Gaba gabadii ayaa waxaa riingaha iskugu haray dagaalyahanada kala ah Randy Orton, Roman Reinz iyo Brai White, balse Orton ayaa ugu dambayn awood uyeeshay ...
John Cena oo markii 16-aad ku guulaystay suunka WWE isagoona bar-bareeyey rikoor horay uyaalay.
John Cena ayaa awood uyeeshay inuu ku guulaysto suunka miizaanka culus ee WWE oo lagu qabtay Royal Rumble kadib markii uu garaacay Aj Styles oo mudo haystay suunkan. Labadan dagaalyahan ayaa waxaa dhexmartay ciyaar xamaasad badan oo soo jiidatay indhaha caalamka maadaama labadan dagaalyahan ay muddo isku diyaarinayeen suunka WWE. Balse ugu dambayn John Cena ayaa markiisii 16-aad kuguulaystay suunka ...